Tolotra Vaovao Avy Amin’ny Basij Militia (Milisy) Any Iran, Ahafahan’ny Fanjakana Mahita Ireo Resadresaka Rehetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2015 7:34 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Español, русский, Català, English
Manantena ireo tompon'andraikitra fa hitarika ireo mpampiasa finday hanalavitra ireo tolotra hita amin'ny finday, toy ny Viber sy WhatsApp izay malaza be any Iran, ny Salam. Dikasary nalain'ny Hetsika Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona any Iran.
Niseho voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ity lahatsoratra ity, ary alefa eto noho ny fiaraha-miasa amin'ny Hetsika Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona any Iran.
Nanambara ny fampielezany ny tolotra vaovaony fandefasana hafatra amin'ny finday, atao hoe “Salam”, ny fikambanana Basij, tafika ivelan'ny fanjakàna, rantsa-mangaikan'ny Mpiaro ny Revôlisiôna (IRGC). Manome fahafahana feno an'ireo tomponandraiki-panjakana ilay tolotra hahita manontolo ireo votoaty sy ireo angon-drakitra rehetra mandalo aminizy io.
Manantena ireo tompon'andraikitra fa ny Salam dia hitarika ireo mpampiasa hiala lavitra ireo tolotra ho an'ny finday izay malaza be any Iran toy ny Viber sy WhatsApp, izay efa nandraman'ny fikambanam-panjakana nahitsoka tany taloha tao anatin'ny ezak'izy ireo hifehy ireo fifampiresahana amin'ny aterineto sy ny fifandraisana rehetra amin'ny finday.
Maneho dingana hafa amin'ireo ezaka hafa ataon”ireo manampahefana amin'ny hanaovana dika mitovy amin'ireo tolotra iraisam-pirenena amin'ny aterineto rehetra ilay tolotra vaovao, mba ho izay navoakan'ny fanjakana, amin'izay mantsy azon'ireo tomponandraikim-panjakana idirana sy jerena ny votoaty an'ny mpampiasa.
Nampidirina ao anatin'io ezaka io daholo ireo fitaovam-pitadiavana angon-drakitra, tolotra imailaka, fitety, ireo OS, ary ireo fanamarinana SSL, izany no natao mba hametrahana Aterineto Nasiônaly voaaramason'ny fanjakana. Mieritreritra ny hanome tolotra misaraka amin'ny Aterineto maneran-tany ary afaka araha-maso sy sivanin'ireo manampahefam-panjakana ilay tetikasa nasiônaly.
Tamin'ny tafatafa niaraka tamin'ny Basij Press, nanambara ny fivoahan'ilay tolotra Salam fandefasana hafatra ny 5 May i Hamid Jafari, Filohan'ny Ivontoeran'ny Fampahalalam-baovaon'ny Basij any Iran. Nilaza i Jafari fa ho solon'ny Viber, WhatsApp, ary Telegram ny Salam, izay “azo itokisana kokoa, marin-toerana, ary azo antoka,” raha oharina amin'ireo tolotry ny Tandrefana.
Nanoso-kevitra ireo mpampiasa ihany koa i Jafari mba hitahiry tsara ny “ny fotoanany sy ny fiainany manan-danja, amin'ny fialàna lavitra ireo tambajotra [sosialy]” sahala amin'ny Viber, WhatsApp ary Telegram. “Raha mijery tsara ny tantaran'ireo tambajotra sosialy ianareo, ho hitanao fa ireo lazaina ho tambajotra sosialy ireo dia mifototra amin'ny fomba filozofia Tandrefana, izay ny maha olona sy ny fomba fisainana mifantoka amin'ny olona no tena antoky ny fanapahan-keviny. Amin'ny fomba filazàna hafa, tsy misy hita ao anatin'ireo tambajotra ireo ny foto-kevitra sy fototry ny fomba fisainana Silamo,” hoy i Jafari tamin'ny Basij Press.
2 herinandro izayAlzeria